दु:खद खबर टिपरको ठ’क्करबाट बाटोमा हिडिरहेका आमा छोरी लियो ज्यान ! « Online Tv Nepal
दु:खद खबर टिपरको ठ’क्करबाट बाटोमा हिडिरहेका आमा छोरी लियो ज्यान !
Published : 17 March, 2020 11:58 am
सोमबार दिउँसो पनौतीमा टिपरको ठ’क्करबाट बाटो हिडिरहेका आमा छोरी ढले । स्थानीयले उठाए । शीर मेमोरियल अस्पताल पुर्याएर । तर आमा छोरीकै ज्यान जोगिएन ।हुन त कतिपय घ’टना गराउछु भनेर नहोला । तर पनौतीको घ’टनामा चालकभित्रको मा’नवीयता पटक्कै देखिदैन । पनौती बसपार्क क्षेत्रको सडक अझै फ’राकिलो बन्न सकेको छैन् । यहि साँ’घुरो सडक भएर अ’बैधानिक खानी र क्रसर उद्योगबाट निर्माण सामग्री लिन जाने र राजधानी फर्कने सयौँ टिपर गुड्छन् ।
जीवनको लामो समय ड्राभिङ गरेकाहरु मध्ये थुप्रैको अनुभव छ, सडकमा सर्प, कुकुर समेत न’मारेको । तर कमै टिपर चालक होलान् जो दु’र्घटनामा नपरेका र नपारेका । जहाँ साघुँरो सडक त्यहि गति ती’ब्र पार्ने टिपर चालकहरुको बानी नै बसिकेको छ ।त्यहि को परिमाण आमा छोरीले ज्यान गु’माएर पनौतीमा ।आइतबार पनि म’ण्डनदेउपुरको कुन्तामा टिपर र मिनी टिपर ठ’क्कर खादाँ २२ जना घा’इते भएको थिए । घा’इते मध्ये केहि अहिले पनि धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।स्थिति नि’यन्त्रण बाहिर जाने देखेपछि जिल्ला प्र’शासन कार्यालय काभ्रेले क’र्फ्यू आ’देश जारी गरेको छ ।